Posted by zizawa ⋅ 27/06/2010	⋅ 11 Comments
Posted by tint oo | 27/06/2010, 07:42 Reply to this comment	lol… ကိုတင့် ခင်ဗျားကို ကိုမန်းကိုကမေးနေတယ်၊ ဘယ်ပျောက်နေလဲတဲ့။
Posted by zizawa | 27/06/2010, 07:58 Reply to this comment	In my weekday computer , your site cannot be read . that is why .And computer in weekend work cannot type in Burmese . That is why . 😛
Posted by tint oo | 27/06/2010, 08:14 ကိုဝတုတ်
ယေဘုယျအားဖြင့် ၀ါဒဖြန့်တယ်ဆိုတဲ့ စကားလုံးကိုကြားရင် ကျွန်မတို့စိတ်ထဲမှာ negative sense ကို ခံစားမိနေစေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ၀ါဒဖြန့်တိုင်း မကောင်းတာ တော့မဟုတ်ဘူး ထင်ပါတယ်။ ဘုရားကလည်း သူ့ရဲံ အနိစ္စ၀ါဒတို့ ၊ မေတ္တာဝါဒ တို့ကို (မကျွတ်မလွတ်သေးသောသူများ)ကို ပစ်မှတ်ထားပြီး ဖြန့်ခဲ့တာပဲလေ။ ၀ါဒဖြန့်တာဟာ (မှိုင်းတိုက်) (အယုံသွင်း) (အပင်းလျိူ) (အတင်းအဖျင်းပြော) ဆိုတဲ့ စကားလုံးတွေနဲ့တော့ နည်းနည်းကွဲမလားလို့ ထင်ပါတယ်။ အဲဒါတွေကို propaganda အုပ်စုသွင်းရမယ်ဆိုရင်လဲ Black propaganda တွေလို့ပဲ အမည်ပေးချင်ပါတယ်။
Posted by မိုးစက်ပွင့် | 27/06/2010, 08:25 Reply to this comment	မ susie,
Posted by watote | 27/06/2010, 09:26 Reply to this comment	The arguments are jumpy and I know it’s vulnerable toaslightest jolt. Maybe I’m playing fast and lose. The conclusions are not spelt out carefully. Perhaps I should have takenabit more time before it’s posted. I have already seen some serious shortcomings here.. Perhaps I’m overworked and bullshiting is taking its toll.. This piece is not up toagood standard. Apologies to my dear readers if you are disappointed. Posted by watote | 27/06/2010, 19:17 Reply to this comment	ကိုယ့်အပြစ်ကိုယ်ပြန်မြင်သူဟာ မတော်ရင်တောင်မှ မညံ့တော့ဖူးဗျ၊ ကျနော်လည်း ဖတ်ပြီးခြေလှမ်းနည်းနည်း ကျဲတယ်လို့ထင်မိပေမယ့် အခြားခုန်အုပ်မယ့် ကျားကြီးတွေကို စောင့်ပြီးမှ ပေါ်လာတဲ့အချက်တွေအပေါ်မူတည်ပြီး ဝင်ရေးမလားလို့ အဟဲ၊ ခုထိတော့ အကောင်ငယ်လို့ ဆက်ဝပ်နေကြတော့ ကိုယ်ပဲ ခုန်ထွက်လိုက်ရတော့တယ်။
Posted by မန်းကိုကို | 28/06/2010, 05:40 Reply to this comment	ဆရာမန်းရေ
ကျွန်တော်ကတော့ ကျွန်တော်လုပ်တဲ့ အလုပ်ကို propaganda လို့မမြင်သလို ဒါတွေဟာ propaganda လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ လူတဦးတယောက်ရဲ့ အကြောင်းအရာ တခုခုပေါ် အမြင်ပြောင်းသွားဖို့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စာရေးနေတာ မဟုတ်ပါ။ မှန်တာကိုသာရေးမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်ဆန္ဒတခုပဲ ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပြောလို့ အမှန်တွေချည်းပဲ ထွက်မယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ် မရပါ။ မှားနိုင်တာတွေ ရှိသလို၊ အရည်မရ အဖတ်မရတွေ၊ အညံ့စား စာတွေလည်း ပါမှာပါ။ နောက်တခါ ကိုယ်နဲ့ သဘောမတူတဲ့ လူတွေကိုလည်း အတင်းမတူတူအောင် လုပ်ဖို့ ဆန္ဒမရှိပါ။ ကိုယ်တန်ဖိုးထားတဲ့ အယူအဆတွေကို လာတိုက်ခိုက်တဲ့အခါမှသာ ကာကွယ်တာမျိုးလုပ်ချင်တာပါခင်ဗျ။ truthfully,
Posted by zizawa | 28/06/2010, 07:42 ကိုဝတုတ်ရေ၊ စကားမှားသွားရင်တော့ ဆောရီးဗျာ၊ တစ်ခုရှိတာက ကိုဝတုတ်မှာ ကိုယ်သိတာကို ဝေမျှလိုစိတ်၊ မသိသေးသူကို သိစေလိုတဲ့စိတ်တော့ ရှိမယ်ထင်ပါတယ်။(အချို့အဆိုးမြင်တတ်သူတွေအတွက်တော့ ဆရာကြီးလုပ်လိုတဲ့စိတ်ပေါ့ဗျာ၊)၊ သိသူတွေချည်းဆိုရင်တော့လည်း ကျနောတို့ဘလော့တွေမှာ သာကြောင်းမာကြောင်းစာတွေနဲ့တင် ပြည့်နေကြမယ်ထင်ပါတယ်။
Posted by မန်းကိုကို | 28/06/2010, 12:42 Reply to this comment	“မှားနိုင်တာတွေ ရှိသလို၊ အရည်မရ အဖတ်မရတွေ၊ အညံ့စား စာတွေလည်း ပါမှာပါ။”
Posted by မန်းကိုကို | 29/06/2010, 03:00 Reply to this comment	ခြောက်ပစ်ကင်း သဲလဲစင်တယ်လို့ ပြောတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိတယ်လို့ ပြောခဲ့ရင် အဲဒီကိစ္စဟာ သွေးရိုးသားရိုး (normal) တော့ ဖြစ်နိုင်မယ် မထင်ပါဘူးဗျာ။ ခုခေတ်မယ် သံသယ၀ါဒီတွေ ပိုများလာသလားတော့ မပြောတတ်ဘူး။ အပေါင်းအသင်းထဲ မှာလည်း အဲလိုယူဆတဲ့လူမျိုး များတယ်။ (စာရေးသူအမြင်နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ဖြစ်တယ်ထင်မိလို့ ချရေးမိတယ်။ အကျယ်တော့ မပြောလို)
Posted by အလှတရား | 29/06/2010, 15:15 Reply to this comment	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...